Ukuzola Eyothusayo iMarlborough izandi zokuRetreat
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDeborah & Phil
Indlu ineembono ezimangalisayo kwi-Kenepuru Sound. Eli cebo lihle livulekileyo lale mihla ikhaya lijikelezwe ngamatyholo omthonyama. Kukho amagumbi amabini avulekileyo acwangcisiweyo kwinqanaba le-mezzanine eline-ensuite yegumbi lokulala eli-1 igumbi lokulala le-2 alikho labucala, kunye negumbi lokuhlambela eliphambili elisezantsi elinebhafu ye-spa etshisiweyo enembono kwityholo lemveli. Ikhitshi langoku elinazo zonke izixhobo zangoku.Omabini amagumbi okulala aneebhedi ezinobukhulu bokumkanikazi ezakhiwe kwiiwodrophu. Iifestile ezimenyezelayo kabini kunye nesitshisi somlilo seenkuni.
Iifestile ezinkulu ezivumela ukukhanya okuninzi.
Le ndlu ibekwe entliziyweni yeZandi zaseMarlborough ezineendlela zamanzi ezicocekileyo kunye netyholo elimangalisayo lemveliKufuphi nendlu kukho umkhondo ohambahambayo onqumla kwihlathi le-beech ukuya kunxweme lwamanzi.
I-Portage Resort ivulekele isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa i-10 min yamanzi iteksi ngaphesheya kwe-bay okanye i-1 yeyure yokuhamba.
Umkhondo odumileyo weQueen Charlotte ufikeleleka ngokulula ngeendlela okanye ngeteksi yamanzi.
I-Pelorus Mailboat esebenza ngaphandle kwe-Havelock, iqhuba iihambo zemini ihlola iindawo ezingaphandle zePelorus Sound.
Thatha ukhenketho kwifama yembaza ngeteksi/umkhokeli wethu wamanzi.
Iitshatha zokuhamba ngeenqanawa ziyafumaneka kunye neZandi nge-Sail.
Kukho iikhilomitha zonxweme olunokuphononongwa ukuba unesakho isikhephe okanye i-kayak, ngokuloba okukhulu.
Eli khaya lifanelekile kwindawo yakho yokubaleka eyimfihlo kule meko ikhethekileyo yendalo yeKenepuru Sound.
Le ndlu ibekwe kwityholo elihle lemveli elinemibono emangalisayo yamanzi. Ecaleni ziingoma zokuhamba kwiindawo zogcino zendalo, ukunyuka ukuya encochoyini, kunye nembono yepanoramic ukuya kwiPelorus Sound. Ukuloba, ukukhwela inqanawa, ukuqubha zonke zifikeleleka ngokulula ukuba unezixhobo zakho.
Indawo entle yokukhwela ibhayisekile intaba, ukuqokelela iimbatyisi kunye namaqhude ukusuka elunxwemeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Deborah & Phil
Sifumaneka kwi-imeyile.text okanye ngefowuni
UDeborah & Phil yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Raetihi